Archives yeAugust 2020
Maitiro ekumhanyisa iyo checkra1n jailbreak pane a Windows PC ine bootra1n
Kana iwe ukatevera cheki che1 check zvakanyanya pa Twitter uye iwe ukaterera kune edu enhau zvidimbu sezvo timu inoburitsa zvigadziriso kune chishandiso, ipapo ungangodaro uchiuya kuzofunga kuti haugone kumhanyisa cheki1n jeri kuputsika kunze kwekunge uine Mac kana komputa inomhanya Linux. Nepo mamiriro ataurwa achiri echokwadi ehunyanzvi, unogona kushandisa chinhu chinobatsira chinonzi bootra1n kumhanya… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekumhanyisa cheki1n jeri kuputsa pa Windows PC ine bootra1n
Nei Spyine iri yakanakisa foni foni tracker
Kana iwe uchida kuramba uine ziso pane mumwe munhu, iwe unogona kuhaya rakavanzika ziso, muswe ivo kutenderedza pachezvako, kana kushandisa foni tracker. Vanhu vazhinji vanoenda nesarudzo yekupedzisira. Nhare dzevateereri dzakachipa, dzinobatsira, uye dzinogona kuteedzera nhamba yemunhu mbozhanhare-refu. Ehe, vateereri vefoni manhamba, semamwe maapplication, anouya akasiyana maumbirwo uye saizi, aine akasiyana mabhero uye miridzo yakatorwa. … [Verenga zvakawanda ...] nezve Nei Spyine iri yakanakisa nharembozha tracker
PhotoDemon ine simba yakavhurika-sosi foto mhariri ye Windows
PhotoDemon yakavhurika sosi yemufananidzo mupepeti weMicrosoft Windows uchishandisa system. Iyo yekuvandudza yakaburitsa PhotoDemon 8.0 munguva pfupi yapfuura, uye ini ndakatora iwo mukana kuti ndinyatso tarisa pane icho chainopa. Iyo yazvino vhezheni yePhotoDemon inowanikwa pane iyo projekiti GitHub webhusaiti. Adventurous vanhu vanogona zvakare kubata iyo Nightly vhezheni pachinzvimbo iyo inopa zvishoma zve… [Verenga zvakawanda ...] nezve PhotoDemon ine simba yakavhurika-sosi foto mupepeti we Windows
Ndiwedzere ruzha rweterevhizheni nesarudzo yedu yemabara epamusoro uye mabhureki aunogona kutenga Iwo maspika akavakirwa mumaterevhizheni azvino ano ruzha runotyisa sekutonga kwese, saka kana uchangobva kukwidziridza iwe urikudawo yakanakisa soundbar kana soundbase iwe yaunogona kutenga. Sei? Nekuti odhiyo, mumaonero edu ekuzvininipisa, yakangokosha sezvinoonekwa mukutora iyo sinema… [Verenga zvakawanda ...] nezve Best soundbar UK 2020: Iwo epamusoro mabara ekurira uye magirobhu ekusimudzira yako TV odhiyo
Kutanga tarisa pane itsva Archive Software chimiro che Windows 10
Ziso regondo Windows 10 vashandisi vakatora tarisa ikozvino Windows 10 Insider build kare inogona kunge yaona nyowani nyowani pasi peAapps mune iyo Zvirongwa application. Sarudzo nyowani ye "Archive Apps" inoratidzwa ipapo. Iyo inogoneswa nekutadza, zvirinani mune ino yekutanga Insider vhezheni ine iyo, uye inogona kuremadzwa kubva papeji nekukanya kana kubaya pane inotsvedza. The… [Verenga zvakawanda ...] nezve Kutanga tarisa pane nyowani Archive Apps chimiro che Windows 10
Enda kune peji 3298